ကျနော် ရုရှားဝတ္ထုတိုတွေ ဘာသာမပြန်ဖြစ်တာတောင် အတော်ကြာသွားပါပြီ။ အခုတော့ ချက်ကော့ဗ်ရဲ့ အတိုတပုဒ်ကို ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုတိုလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ အဲဒီဇာတ်လမ်းထဲက ကောင်လေးကို ဒီကောင်ကွာ ပျော်စရာလည်း မဟုတ်၊ ဘာမဟုတ်တာလေးကို အဟုတ်ကြီးထင်နေတယ်ဆိုပြီး ပြုံးစိစိလေးဖြစ်သွားတယ်။ ပြန်ဖတ်တော့ အဲဒီဇာတ်ကောင်လေးကို သနားလာတယ်။ ထပ်တွေးလိုက်တော့ သူ့ကို သနားပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားလာတယ်။ ဆက်တွေးမိတော့ သူများတွေကိုပါ သနားလာတယ်။ ဘော်ဘော်တို့လည်း ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
အချိန်က ညသန်းခေါင် ၁၂ နာရီ။
မိကျိယာ ကူ(လ်)ဒါရော့(ဗ်) တစ်ယောက် သူ့မိဘများနေရာ တိုက်ခန်းအတွင်းကို ဆံပင်တွေ ဖရိုဖရဲနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြေးဝင်ပြီး အခန်းအားလုံးကို အမြန်ဖြတ်ပြီး ပြေးသွားလေရဲ့။ သူ့ညီမက အိပ်ယာထဲမှာ ဝတ္ထုစာအုပ် အဆုံးသတ်ကို ဖတ်နေပြီး ညီငယ်ကျောင်းသားလေးတွေကတော့ အိပ်ပျော်နေပါပြီ။
-“ဟဲ ဘယ်ကနေဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲဟဲ့” ဆိုပြီး မိဘတွေက တအံ့တဩမေးပါတယ်။
-“မမေးကြပါနဲ့ဗျ။ ကျနော် ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒါကို မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ တကယ့်ကို ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတဲ့ ကိစ္စပါ။”
မိကျိယာတစ်ယောက် တဟားဟားရယ်ပြီး ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်ချလိုက်တယ်။ အပျော်တွေလွန်ပြီး သူ့ခြေထောက်ပေါ် သူတောင် မရပ်နိုင်တော့လောက်အောင် ဖြစ်နေသလိုပေါ့။
-“ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာ။ ခင်ဗျားတို့လည်း မျှော်မှန်းထားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်စမ်းပါ။”
ညီမလုပ်သူက အ်ိပ်ယာထဲကနေ ခုန်ထွက်လာပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စောင်နဲ့ ပတ်ပြီး သူ့အကိုဆီကို သွားတယ်။ အငယ်ကောင် ကျောင်းသားလေးတွေလည်း နိုးလာတယ်။
-“ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ။ မျက်နှာကို ရူးနေတာပဲ။”
-“ကျနော် ပျော်နေတာက ဒီလို အမေရဲ့။ အခုလေ ကျနော့်ကို ရုရှားတစ်နိုင်ငံလုံးက သိနေပြီ။ အဲဒါမတိုင်ခင်တုန်းက ဒမိသရိ ကူ(လ်)ဒါရော့(ဗ်) ဆိုတဲ့ ရုံးစာရေးလေးရှိတယ်ဆိုတာကို မေမေတို့ပဲ သိတာလေ။ အခုတော့ တနိုင်ငံလုံးက သိနေပြီ မေမေရ။ ပျော်လိုက်တာ မေမေရယ်။”
မိကျိယာ တစ်ယောက် အခန်းအစုံ ခုန်ပေါက် ပြေးဆင်းပြီး၊ ပြန်ထိုင်တယ်။
-“ခင်ဗျားတို့ကလေ တိရိစ္ဆာန်အရိုင်းအစိုင်းတွေလိုပဲ သတင်းစာလည်း မဖတ်ဘူး။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်း သတိမပြုမိဘူး။ သတင်းစာမှာက စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးပါတယ်။ တခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင် အားလုံးက ချက်ချင်းတန်းသိတာ။ ဘာမှ ဖုံးဖိထားလို့ကို မရဘူး။ ကျနော်တော့ သိပ်ပျော်တာပဲဗျာ။ အို ဘုရားသခင်။ သိကြရဲ့လား ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေကိုသာ သတင်းစာတွေမှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြတာ၊ အခုကျနော့်အကြောင်း သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြနေပြီ။”
ဖေဖေမျက်နှာ ဖြူဖတ်ဖြူရော် ဖြစ်သွားတယ်။ မေမေကတော့ ဘုရားစင်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး ဘုရားတနေလေရဲ့။ ညီလေးတွေလည်း အိပ်ယာထဲက ခုန်ထွက်လာပြီး ညဝတ်အင်္ကျီတွေနဲ့ပဲ အကိုကြီးဆီကို ကပ်လာတယ်။
-“ဟုတ်တယ် မေမေ၊ ကျနော့်နာမည်ကို ဖော်ပြခံရတယ်။ အခုတော့ ရုရှားတနိုင်ငံလုံးက ကျနော့်ကို သိနေပါပြီ။ ဒီစာရွက်ကလေးကို သိမ်းထားပါ။ ကျနော်တို့ မကြာခဏ ဖတ်ကြတာပေါ့။ ဒီမှာကြည့်။”
မိကျိယာက သူ့အိပ်ကပ်ထဲက စာရွက်မိတ္တူလေးကို ထုတ်ပြီး သူ့အဖေ့ကို ပေးလိုက်ပြီး အပြာရောင်ခဲတံနဲ့ မှတ်ထားတဲ့ စာပိုဒ်လေးကို လက်နဲ့ညွှန်ပြလိုက်တယ်။
အဖေလုပ်သူက မျက်မှန်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။
အမေလုပ်သူက ဘုရားစင်ကို ကြည့်ပြီး ဘုရားထပ် တ တယ်။ အဖေလုပ်သူက လည်ချောင်းတစ်ချက်ရှင်းလိုက်ပြီး စဖတ်တယ်။
-“ဒီဇင်ဘာ ၂၉-ရက် ည ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ဒမိသရိ ကူ(လ်)ဒါရော့(ဗ်) ဆိုသော ရုံးစာရေးလေးသည်..”
-“တွေ့လား တွေ့လား ဆက်ဖတ်”
-“ဒမိသရိ ကူ(လ်)ဒါရော့(ဗ်) ဆိုသော ရုံးစာရေးလေးသည် မာလာ ဘရိုနင်လမ်းရှိ ကိုဇီဟီအဆောက်အအုံရှိ ဘီယာဆိုင်မှ မူးနေသော အနေအထားဖြင့် ထွက်လာသည်။”
-“အဲဒါ ကျနော်နဲ့ စီမျုန်း ပျယ်သရိုဗိခ်ျ လေ တိတိကျကျကို ဖော်ပြထားတာ။ ဆက်ဖက်ပါဦး နားထောင် နားထောင်”
-“မူးနေသော အနေအထားဖြင့် ထွက်လာပြီး ယူဟနော့်ဗ်စကီးနယ်၊ ဒူရိကိနိုရွာမှ လယ်သမား၊ လှည်းမောင်းသူ အီဗန် ဒရာတော့ဗ် ပိုင်သောမြင်းအောက်သို့ ခြေချော်ပြီး လဲကျသွားလေသည်။ မြင်းလန့်သွားပြီး ကူ(လ်)ဒါရော့(ဗ်)ကို နင်းသွားကာ လှည်းသည်လည်း သူ့အပေါ်မှ ဖြတ်မောင်းသွားသည်။ ယင်းလှည်းပေါ်တွင် မော်စကိုကုန်သည်ကြီးအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ စတီပန် လျူးကော့ဗ် ပါသွားလေသည်။ လှည်းသည် လမ်းအတိုင်းထွက်သွားရာ သန့်ရှင်းရေးသမားများမှ ဆွဲဖမ်းထားရလေသည်။ ကူ(လ်)ဒါရော့(ဗ်)သည် အစပိုင်းတွင် သတိလစ်နေပြီး ရဲဌာနသို့သယ်ဆောင်သွားပြီး ဆရာဝန်များက စမ်းသပ်ပေးရသည်။ သူ၏နောက်စေ့တွင် ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီး..”
-“လှည်းဝန်ရိုးနဲ့ ထိသွားတာ ဖေဖေ။ ဆက်ဖက်ပါဦး ကျန်တာလေးကို”
-“နောက်စေ့တွင် ဒဏ်ရာရသွားပြီး အခြေအနေမှာ အလွန်းမဆိုးရွားလှပေ။ ထိခိုက်မှုအား အသေအချာ တင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူအား ဆေးကုသမှု ပေးခဲ့သည်…”
-“နောက်စေ့ကို ရေအေးအေးနဲ့ ပွတ်ပေးရမယ်ပြောတယ်။ ဖတ်ပြီးပြီ မဟုတ်လား။ ကဲ သိပြီလား အခုတော့ ရုရှားတနိုင်ငံလုံး သိသွားပြီ။ ဒီကို ပေးဦး။”
မိကျိယာသည် သတင်းစာကို ဆွဲဖမ်းယူကာ အိပ်ကပ်အတွင်းသို့ ထိုးလိပ်သွင်းလိုက်သည်။
-“ကျနော် အဲဒီသတင်းကို မာကာရော့ဗ်တို့ဆီ ပြေးပြီး ပြလိုက်ဦးမယ်။ အီဗန်းစကီးတို့လည်း ပြရမယ်၊ နာတာရှာ အီဗန်နော့ဗနာရော ပြီးတော့ အနာစီးမ် ဗာစီလီရယ်ဗိခ်ျ တို့ကိုလည်း ပြမယ်။ ပြေးပြီးဗျို့။ ဘိုင့် ဘိုင့်…”
ပျော်ရွှင်နေသော၊ အောင်မြင်မှုသရဖူကို ပန်ဆင်ထားသော မီတျိယာတစ်ယောက် ငှက်မွှေးဦးထုပ်ကလေးကို ဆောင်းကာ လမ်းမပေါ်သို့ ပြေးသွားလေသည်။
အန်တွန် ပါဗလိုဗိခ်ျ ချက်ကော့ဗ်
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья гимназисты спали.
– Да с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!
– Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!
Posted by ဇနိ at 2:36 AM
လွင်ပြင် December 11, 2008 at 3:02 AM
- December 11, 2008 at 3:58 AM
ဘာသာပြန် ပို့စ်လေးဖတ်သွားပါတယ်။ ပေးချင်တဲ့ message ကောင်းတယ်။ ဘာသာပြန်ကို နှစ်သက်တယ်။ ကျေးဇူးပါ
Yu Wa Yi December 11, 2008 at 4:07 AM
အတော်ကို အောင်မြင်ထင်ပေါ်ရှာတာကိုး…။ ဒုက္ခ..ဒုက္ခ..(တရားရခြင်း)
ဒါနဲ့ ဘာသာပြန်တော်လိုက်တာနော်( မူရင်းကို နားလည်ချင်ယောင်ဆောင်၍ ၀င်ရွှီးခြင်း)။
နောက်တာပါ။ ဘာသာပြန်ကောင်းမယ်လို့ တော့ယုံပါတယ်။
Republic December 11, 2008 at 4:31 AM
ကွာဟမှုလေးတစ်ခု လင်းကနဲ တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာ ၊၊
ကိုနိ ..ကျေးဇူး ၊၊
sin dan lar December 11, 2008 at 5:59 AM
မူရင်းကိုတော့ မဖတ်တတ်ပါ။ ဘာသာပြန်လေးကတော့ ဖတ်ကောင်းပါတယ်။ ရုံးစာရေးလေးကို သနားရမလိုလိုဖြစ်သွားတယ်
Moe Cho Thinn December 11, 2008 at 8:45 AM
ဘာသာထပ်ပြန်ပါအုံး။ စောင့်ဖတ်မယ် ကိုနိရေ။
Как хорошая эта история! Вы очень умный, дядя.
Благодарю Вас за перевод. Мне будет ждать дальше.း)
khin oo may December 11, 2008 at 7:48 PM
ရု့းံတွင် ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရာ. အရာရှိ တစ်ဦးက တင်ပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ ငှာန ရဲ့ နှစ်ပါတ်လည်ကို ဘယ်လို ကြော်ငြာပြီး လူသိအောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကို ဆွေးနွေးကြဘို့ပါဘဲ။ စရိတ်အကုန်အကျလဲ မများရဘူး ။ လူတိုင်းလဲ သိစေချင်တယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ ကိုလည်း ပျော်စေချင်တဲ့ အစီအစဉ် ကလေးကို ဝိုင်းပြီးတင်ပြကြဘို့ပါဘဲ
အတန်ငယ်ငြိမ်သွားရာမှ တစ်ဦး ကထပြောသည်။ အကြံပြူချင်တာ ကတော့ မန်နေဂျာက ရုံးပေါ်ကနေပြီး ခုန်ချ လိုက်ဘို့ပါဘဲ။ အားလုံးလဲ သိသွားမယ်။ စရိတ်လဲ မကုန်ဘူး။ ကျွန်တော်တိုရဲ့ဝမ်းသာ မှူကတော့ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး။
ကိုရင်ညိန်း December 11, 2008 at 10:49 PM
ကျေးဇူးပဲ (ကို) အမ်သွန်ဇနိ ။
Антон Знихов ပေါ့ အဟေးဟေး :)
မေအောင် December 14, 2008 at 1:17 AM
အင်း ကျော်ကြားချင်တော့ ဒီလို ဒီလိုပဲပေါ့။
တားမြစ် ထားသော... December 22, 2008 at 4:33 AM
ချက်ကော့ဗ် ကတော့ ချက်ကော့ဗ်ပါပဲ။
ခေတ်ရယ် စနစ်ရယ်။ လူနေမှုဘဝတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝတွေ။ လူသာမာန်ဆိုတော့လည်း သတင်းစာမှာပါလာတော့ ရေအေးနဲ့ပွတ်ပြီး ဆေးကုပေးတဲ့အဖြစ်ကို မေ့နိုင်တယ်ထင်ပါရဲ့။
ကောင်လေးကို သနားသင့်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သနားသင့်တယ်။ ရှေ့ဆက်တွေးပြီး သူများတွေကိုပါ သနားလာရင်း နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သိနိုင်ရမှာပါ။
ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ။ ဘာသာပြန်တာကောင်းလို့ တွေးစရာတွေပါလာတယ်ထင်ပ။